जिल्ला प्रशासनले भन्यो : काठमाडौमा यी ५ कुरा गर्न पाइन्न, ! – Life Nepali
जिल्ला प्रशासनले भन्यो : काठमाडौमा यी ५ कुरा गर्न पाइन्न, !
काठमाडौ । काठमाडौं उपत्यकामा अझै पनि निषेधाज्ञा जारी छ । तर आज विहिवार देखिको निषेधाज्ञा भने केही खुकुलो बनाइएको छ । उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरले एकसाथ आदेश जारी गरी आज देखि गर्न पाइने र नपाईने नियमका बारेमा खुलाएको छ । असोज १ देखि विभिन्न ५ कृयाकलाप सहित अरु खुला गरिएको जनाइएको छ । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
विज्ञप्तीमा कोरोनाको जोखिम नभएकोले यस्तो नियम लागू गरिएको भन्ने नबुझ्न पनि आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, तर यसको अर्थ कोरोना भाइरसको जोखिम कम भएको भनेर पटक्कै नबुझ्नु होला काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) जनकराज दाहालले सुझाव दिएका छन् ।
जनजीविकाका लागि सहज होस् भनेर आजदेखि प्रतिबन्ध केही खुकुलो मात्र बनाइएको जनाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थप १० गुणा बढी सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । सूचनामा दैनिक कृयामकलाप सचालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय अपनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । भिडभाडमा नजान र सतर्कता अपनाउन भनिएको छ । अत्यावश्यक कामका लागि बाहिर जाँदा समाजिक दुरी कायम गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचनामा उल्लेख भएका यि ५ कृयाकलापमा भने रोक लगाएको छ ।
Previous खुसिको खबर – नेपाल टेलिकमले ल्यायो अहिलेसम्मकै सस्तो डाटा प्याक !
Next यस कारण गर्दैछ अमेरिकाले पन्ध्र हजार नेपालीलाई देश निकाला गर्ने तयारी !